??? showing instead of japanese characters in Oracle Sqlplus - MYSTERY ZILLION
??? showing instead of japanese characters in Oracle Sqlplus
February 2015 in Database
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။သုံးတဲ့ Databaseက Oracle 10g ပါ။Databaseမှာ Japanese character တွေကို သိမ်းချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ NLS_CHARACTERSET ကို JA16SJISTILDE ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Oracle Sqlplus မှာ Database ထဲက Data ကို ဆွဲထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ ??? အဖြစ်ပေါ်နေတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ မစကြပါဦးခင်ဗျာ။Oracle database ကို အသုံးချဖူးတဲ့လူများ ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ (